थाहा खबर: ह्वाइटहाउसभित्र कमाण्डो पठाएर ट्रम्पलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ : ओबामा
| (Sunday, 13 June, 2021)
ह्वाइटहाउसभित्र कमाण्डो पठाएर ट्रम्पलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ : ओबामा
मंसिर ६, २०७७ शनिबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव हारिसकेका छन्। तर, उनले हार स्वीकारेका छैनन्।
चुनाव हारेका ट्रम्प नोभेम्बर ३ यता ह्वाइटहाउसबाट बाहिर देखिएका छैनन्।
यही बीचमा पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाले ट्रम्पको जिद्दीपन बारे बोलेका छन्। एक अन्तर्वार्ताका क्रममा ओबामाले भनेका छन्, 'यदि कोही ह्वाइट हाउसको कुनामा बसिरहेको भए, उनलाई बाहिर निकाल्न म हाम्रो नेभिसील कमाण्डोहरूको टोली पठाउँथें।'
नेभिसीललाई विश्वकै खतरनाक कमाण्डो टोलीका रूपमा लिइन्छ। २०११ मे २ को रात पाकिस्तानको एबोट्टावादमा अल कायदाका नेता ओसामा बीन लादेनको हत्या यही नेभिसीलले गरेको थियो।
ओबामा शुक्रबार प्रसिद्ध टिभी कार्यक्रम 'जिमी किम्ल लाइभ' मा आफ्नो पुस्तक 'ए प्रमिस्ड ल्याण्ड' को प्रमोसनमा सामेल भएका थिए। यस समयमा उनले धेरै प्रश्नहरूको जवाफ दिए। धेरै जसो प्रश्नहरू रमाइलो किसिमका थिए। उही समयमा, जिम्मीले ओबामालाई सोधे, 'ह्वाइटहाउसमा त्यस्तो कुन ठाउँ छ, जहाँ कोही बाहिर निस्किने डरले लुक्छ, भेट्न गाह्रो हुन्छ?'
बाराकले हाँस्दै जवाफ दिए, 'मलाई लाग्छ : हामीले हाम्रो नेभिसील कमाण्डोहरू पठाएर जुनसुकै व्यक्तिलाई निकाल्न सक्छौं।'
सत्ता हस्तान्तरण कहिले सुरू हुन्छ?
संयुक्त राज्यमा सरकार परिवर्तन भएमा जनरल सर्भिस एडमिनिस्ट्रेशनको कामको उच्च जिम्मेवार हुन्छ।
यो ट्रान्जिसन गर्ने टोली हो। हालसम्म यसले कुनै सूचना जारी गरिसकेको छैन। यो डिसेम्बर १४ को इलेक्टोरल कलेज बैठकपछि जारी गरिने विश्वास छ।
यसपछि, ट्रम्पको ह्वाइटहाउस छोड्ने वैधानिकता सकिनेछ । तबसम्म चुनावमा भएको भनिएको धाँधलीका विषयमा पनि सबै निर्णय सार्वजनिक भइसक्नेछन्।
एक प्रश्नको उत्तरमा ओबामाले भने, 'जब म २००८ मा राष्ट्रपति भएँ, जर्ज बुस जुनियरले आफ्ना अधिकारीहरुलाई ट्रान्जिसनको काम तीव्र रूपमा गर्न आदेश दिएका थिए, हामीले एक अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्दछ।'
ओबामाको यो भनाइ ह्वाइटहाउस छाड्न आनाकानी गरिरहेका वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पप्रति लक्षित थियो। ट्रम्पले अझैसम्म आफूलाई पराजित गरेका जो बाइडनलाई बधाई दिएका छैनन्‌ भने ह्वाइटहाउस छाड्ने तरखर गर्न समेत आनाकानी गरिरहेका छन्‌।
हजमा ६० हजार मानिसलाई अनुमति दिने साउदी सरकारको घोषणा
म्यानमारमा थप ६३८ जना प्रदर्शनकारी गिरफ्तार
जेठ २८, २०७८
भाजपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नै त्रिणमूल कांग्रेसमा प्रवेश
इथियोपिया : टिग्रे इलाकामा ३३ हजार बालबालिकाको ज्यान जाने स्थिति
आफ्ना नागरिकलाई चीन भ्रमणको अनुमति दिन भारतको आग्रह
बेलायतले गरिब राष्ट्रलाई १० करोड डोज खोप अनुदानमा दिने
तलब थोरै बढेको भन्दै पाकिस्तानका सरकारी कर्मचारी आन्दोलित
म्यानमारमा १४ जना सैनिक सवार विमान दुर्घटनाग्रस्त
विहारमा मृत्यु संख्या अद्यावधिक गरेपछि देखियो मृत्युको नयाँ रेकर्ड
कोपा अमेरिका : कोरोना हटस्पट ब्राजिलमा खेल, खेलाडीहरू धमाधम संक्रमित
भालुपहाड पहिरो अपडेट : सिद्धार्थ राजमार्ग एकतर्फी खुल्यो
पाँचथरमा वृद्धको हत्या
ईमेल : mkt.thahakhabar[email protected]